वदनामी र अपमानका साथ उपेन्द्रको सत्ता यात्रा - Jhilko
वदनामी र अपमानका साथ उपेन्द्रको सत्ता यात्रा
४ मंसिर,२०७६ 241 0
‘हामीले सरकार छोडेमा प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले राजपालाई सरकारमा लान्छन, त्यसको गुप्त तयारी पनि भइरहेको छ । त्यही तयारीको कारण अनिल झाहरु पार्टी एकता विरोधी कुरा गर्दै हिडिरहेका छन र पार्टी एकता हुन दिदैनन् । हामीले सरकार छाडेमा राजपा संघीय सरकारमा जान्छ र प्रदेश सरकारमा पनि नेकपाको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व गर्छ । प्रदेशमा मन्त्री खान नेकपा नेताहरु पनि सबैतिर लबिङ गर्दै हिडिरहेका छन् । अहिले आन्दोलन उठ्ने अवस्था पनि छैन र जवर्जस्ती गरिएको अहिलेको आन्दोलनले निर्वाचन या सरकारमा पनि फेरबदल गर्दैन । सबैतिरबाट हामीमाथि षडयन्त्र छ, यस्तो अबस्थामा सरकार छोडेर के गर्नु ?’
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सो पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, अशोक राई लगायतसँगको अनौपचारिक छलफलमा दिएको अभिव्यक्तिको सारांश हो यो । यसअघि संविधान संशोधनको मागलाई अल्टिमेटम दिने र त्यो पूरा नगरेमा तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने निर्णय गराएका समाजवादी पार्टीका थपना (मानार्थ जस्तै लाग्ने भूमिकाविहीन अध्यक्ष लिएको कारण) अध्यक्ष डा. भट्टराई पनि उपेन्द्रको अभिव्यक्तिमा सहमत भए । अनि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाई थपना अध्यक्ष डा. भट्टराइको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको नाटक गरेर उपेन्द्रलाई सत्तालोलुप प्रमाणित गर्न दिइएको कानुन मन्त्रीको पदभार ग्रहण गराइयो ।
मञ्च पाएपछि र केही मान्छे देखेपछि विगतको क्रान्तिकारी पार्टीमा रहेकै जसरी उत्तेजक भाषण दिने बानी परेका डा. भट्टराइले पोखरामा दिएको अभिब्यक्ति र उनी सत्तापक्षको सांसद बन्न पार्टी एकता गरेर सत्ता पक्षको सांसद बने पनि प्रतिपक्षको व्यवहार गरिरहेको कारण उनी संयोजक रहेको वार्ता समितिलाई सरकार पक्षले कुनै वास्ता गरेको छैन । न त गर्ने कुनै संकेत नै देखिएको छ । वार्ता समितिको नाममा डा. भट्टराइले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेमा भेट नपाउने निश्चित रहेको छ । स्वयम् उपेन्द्र समेतले क्याबिनेट बैठक बाहेक प्रधानमन्त्रीसँग भेट नपाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा न त त्यो समितिको कुनै औचित्य छ न डा. भट्टराईको कथित संयोजक पदको नै । आम कार्यकर्ता र जनतामा छारो हाली उपेन्द्रको सत्तालोलुपतालाई राजनीतिक मसला बनाउन मात्र यस्तो समिति बनाइएको हो । लामो राजनीतिक यात्राको दौरानमा उपेन्द्र धेरै पटक सत्ता बाहिर रहे । तर अहिले आएर वदनामी र अपमानका साथ किन सत्तामा टाँसिइरहेका छन ? सबैतिर प्रश्न सुनिन्छ । अझ उनको मन्त्रालय परिवर्तन मात्र होइन, बर्खास्तीको तयारी थाहा पाएकाहरु त उपेन्द्र किन सत्तामा छन् ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको क्रममा समाजवादी पार्टीका तीनै जना मन्त्रीलाई बर्खास्ती गर्ने योजना सुनाएका थिए । तर, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपेन्द्रको मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने र राज्यमन्त्री बर्खास्त गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराएका थिए । त्यही कारण उनले कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरु यसो गरेपछि उपेन्द्रले सरकार छोड्छन भन्ने अनुमानमा थिए र वामदेवले मन्त्री बनाउन ठूलो दवाव दिएका रामवीर मानन्धरलाई शहरी विकास राज्यमन्त्रीमा पठाइयो । समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि राज्यमन्त्रीकै हैसियतमा क्याबिनेट मन्त्री हुन मन्त्रणा पाएका मानन्धर पनि अहिले हिस्स परेका छन् । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई भने प्रचण्ड र नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलको चाकडी गरेकै कारण मन्त्रालय परिवर्तनबाट बचे । उनी आगामी निर्वाचनमा नेकपा प्रवेश गरेर बाँकेबाट निर्वाचन लड्छु भन्दै दुवै नेताहरुको निवासमा पटकपटक पुगिसकेका छन् । अहिलेको अवस्थामा नेकपा एक्लैले नजित्ने राईको क्षेत्रमा उनलाई टिकट दिन नेकपाका नेताहरु सहमत नै देखिन्छन । सायद त्यही भएर होला पनि मन्त्री राईले कतिपय नेकपाका नेता कार्याकर्ताहरुलाई सकेको जागिर लगाइरहेका छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै मन्त्रीको मन्त्रालय परिवर्तन नगरी उपेन्द्रको मात्र गर्दा पनि समाजवादीले सरकार छोड्छ भन्ने अनुमान थियो । तर, त्यसले फेल खायो । उपेन्द्र विभिन्न वहाना र जोक गर्दै कानून मन्त्रीमा आसिन छन ।
आन्दोलन र संविधान संशोधन भन्दै फुरफुर गर्ने उपेन्द्रले कानून मन्त्रालय पाएपछि कसरी संविधान संशोधन गर्छन, अब यो जिम्मेवारी पाएपछि उनको माग उनले नै पूरा गर्ने त हो नि भन्ने तर्कहरु गर्न थालिएको छ । तर, उपेन्द्रले त्यो काम गर्न सक्दैनन्, उनको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी वदनामी र अपमानका साथ सरकारी गाडी चढ्ने रहरमा मात्र सीमित हुनेछ । सायद आन्दोलन गर्दा थाकेको र तत्काल आन्दोलनको खेती नहुने देखेकै कारण पनि हुनुपर्छ, उपेन्द्रले झण्डावाल गाडी छोड्ने संकेत दिएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा विदेशमा रहदारहदै कानुनमन्त्री बनेका उपेन्द्रले अपमान सहेर मात्र सरकारमा बसेनन् सत्ता छाड्न लगातार दवाव दिने डा. भट्टराईलाई समेत सत्तारुढ बनिरहनका लागि सहमत गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीलाई ‘लु सरकार छोडे छोड न त’ भनेर मन्त्रालय परिवर्तन गरेपछि विगतमा जसरी समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि संविधान संशोधन नत्र...... भन्ने अभिव्यक्ति दिन छोडेका छन् । डा. भट्टराइको पछि लागेर समाजवादीमा प्रचारप्रसार संयोजक भएका विश्वदीप पाण्डेले सडकको धम्की दिएको बाहेक अरुले खासै केही भनेनन् । आन्दोलन उठाउन सक्ने उपेन्द्र त ल¥याक लुरुक भएको बेला पाण्डेजस्ता लिलिपुटले दिएको धम्कीको के अर्थ ? अहिले समाजवादी पार्टीको संविधान संशोधनको मुद्धा देखाउने दाँतमा सीमित भएको छ । सायद चुनावकै कुनै मोड या सत्ताको चलखेल बढेको बेला भने बौउरिन सक्छ । अहिलेलाई भने कुराकै लागि त हो नि भनेजस्तै भएको छ । सरकार किन नछाड्ने भन्ने विषयमा उपेन्द्रले माथि दिएको अभिव्यक्ति नै पर्याप्त छ । आन्दोलनको रोटी सेकेर खाने डा. सी.के राउत त राजनीतिको मूलधारमा आउन खोजेको अवस्थामा उपेन्द्रले गर्न नै के सक्छन र ? कुनै समय आउला, उपेन्द्र फेरि कुर्लेलान । तर, अहिले भने वदनामी र अपमानका साथ झण्डावाल गाडीमा हिड्दैछन । त्यो पनि मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले कुनै रेस्पोन्स नगर्ने मन्त्रीको रुपमा ।
सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी सुधीरले लिए घुस
युकेको कन्टेनरभित्र फेला परेका ३९ वटा शव चिनियाँहरू भएको...
५ कार्तिक,२०७६0140
हत्याको आशङ्कामा नोर्दन आयरलन्डका २५ वर्षीय लरी चालक मो रोबिन्सनलाई पक्राउ गरिएको...
सामान्य रगत परीक्षणबाट फोक्सोको क्यान्सर पत्ता लगाउने विधि...
१ आश्विन,२०७६0124
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वैधानिक विवाद चर्किदै
५ श्रावण,२०७६0304
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष हुनुपर्ने वैधानिक विवाद...
७ जेठ,२०७६0432
आज भन्दा चार दिन अगाडि मे २० सोमवारको दिन अमेरिकामा ग्यालोप पोलले एउटा सर्भेको नतिजा...